‘अहिले टीभीएस अटोको शो रुम सञ्चालन गरिरहेको छु, केही दिनमै इटहरीको सङ्गीत चौकमा नयाँ होटलको पनि सञ्चालन हुनेछ । त्यसका साथै आफूले पढेको सिभिल इञ्जिनियरिङ सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गरिरहेको छु ।’
व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु उनको परिवारको लागि नयाँ अनुभव भने होइन । तर, उनले पढाइको सिलसिलामा इञ्जिनियर बने । भारतको ब्याङ्लोरमा सिभिल इञ्जिनियरिङ कोर्ष गरेपछि उनी काठमाडौंमा जागिर खान थाले । २६ वर्षीय युवा व्यवसायी मिसन पराजुलीले जागिरे जीवनभन्दा व्यवसायमै भविष्य देखे । अहिले उनी उदयीमान युवा व्यवसायीका रूपमा देखिएका छन् । मोटरसाइकलको शो रुमदेखि अटो बजारमा पनि उनको उपस्थिति रहेको छ । टीभीएस कम्पनीको उत्पादन रहेको अटो टेम्पोको आधिकारिक बिक्रेतादेखि होटल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । रोट्रयाक क्लबको प्रोफेस्नल म्यानेजिङ डाइरेक्ट, जेसिजमा आवद्धतादेखि विभिन्न सङ्घ–संस्थामा आवद्ध भएर सामाजिक सेवामा समेत सक्रिय युवा व्यवसायी पराजुलीसँग ब्लाष्टका लागि बाबुराम सुवेदीले गरेको कुराकानीः
मिसन पराजुली (सञ्चालक)
मिसन ट्रेडर्स इटहरी
– अहिले म व्यवसायमै व्यस्त छु । पढाइ सकेर केही समय जागिरमा लागेँ । तर, मलाई जागिर भन्दा पनि कुनै व्यवसाय गर्ने सोच थियो । फेरि बुबाले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको यमाहा कम्पनीको शो रुम सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि भयो । त्यसै बेला मैले जागिर छाडेँ । डेढ वर्ष जति भेलुएसन कम्पनी र भूकम्प प्राधिकरणमा काम गरेँ । दुई वर्ष अघिदेखि यी सब काम छाडेर विराटनगरको यमाहा कम्पनीको शो रुम सञ्चालन गरें । जुन बुबाले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ व्यवसाय गरेको नयाँ अनुभव बढाउँदै गर्दा अहिले मैले इटहरीमा टीभीएस कम्पनीका अटो टेम्पोको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा नयन ट्रेडर्स सञ्चालन गरिरहेको छु । त्यसको साथै इटहरी सङ्गीत चौकमा होटल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छु । केही दिनपछि होटल सञ्चालनमा आउनेछ । यता मैले सिकेको विषय अनुसारको इटहरीमै कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गरिरहेको छु ।
जागिरको अनुभव पनि छ । जागिर सजिलो कि व्यवसाय सञ्चालन रहेछ ?
– पहिलो, मैले यमाहा शो रुम विराटनगरमा काम गरेँ । बुबाले हेर्दै आउनु भएको व्यवसायमा पारिवारिक समस्याका कारण मैले सम्हाल्नु पर्ने भयो । त्यति बेलासम्म मलाई यस सम्बन्धी त्यति थाहा थिएन । पढाइको सिलसिलमा मैले यस्तो जिम्मेवारी लिनु परेन । त्यसले गर्दा पनि केही समस्या त भयो तर केही समय पछि म व्यवसायमै लाग्ने सोच बन्यो । त्यसपछि टीभीएस किङ टेम्पोको डिलर लिएर व्यवसाय गरेँ । यो जगदम्बा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा व्यवसाय सञ्चालन शुरु गरेँ ।
– महिलादेखि नै मलाई विदेश जाने इच्छा थिएन । पढ्नका लागि गएका युवाहरू उतै हराउने प्रचलन बढेसँगै मलाई त्यसप्रति इच्छा भएन । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि यही उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन हुन जरुरी छ । यो सरकारले बनाउने योजना भयो । यदि सरकारको मुखमात्रै ताक्ने कुरा हो भने हामी पनि पलायन हुने दिन आउन सक्छ । त्यसले गर्दा मैले व्यवसायलाई उमेर छँदै सम्हाल्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । अहिले जेजति काम गर्दैछु । केही दिनमै इटहरीको सङ्गीत चौकमा नयाँ होटलको पनि सञ्चालन हुनेछ । त्यसका साथै आफूले पढेको सिभिल इञ्जिनियरिङसम्बन्धी कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गरिरहेको छु ।
तपाईंले गरेको व्यवसायले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सक्ला ?
– मैले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने भन्ने होइन । तर, पनि मैले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा कमाइ हुने पैसा घरमै बसेर कमाउन सक्छन् । हामीले सानो पुँजीमा व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अटोबाट धेरैले नेपालमै रोजगारी पाउन सक्छन् । केहीले कम्पनीमा काम पाउँछन् भने धेरैले अटोमार्फत् स्वरोजगार बन्न सक्छन् । त्यसको लागि फाइनान्सको समेत व्यवस्था गरिएको छ । म आफैं पनि कहीँ रोजगारी गरेर आएको र पढाइ पनि भएकाले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै सजिलो भएको छ । व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न पढाइ पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । जसले गर्दा मैले धेरै सहज महसुस गरेको छु ।
यति धेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यक पर्छ नै कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
– व्यवसाय भनेको पैसा जम्मा गरेर गर्ने चिज होइन । यो सबै बैङ्कबाट लगानी गराएर गर्ने चिज हो । मैले पनि त्यही नै गरेको हो । बैङ्कबाट ऋण लिएर यी व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था हो । भोलिका दिनमा थप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।
तपाईंकै उमेरमा तपाईंकै साथीहरू के गर्दैहुनुहुन्छ ?
– केही साथीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुभयो । केही अध्ययनकै सिलसिलामा नेपालमा र विदेशमा हुनुहुन्छ । व्यवसायमा लाग्नु भएका केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । कतिपय घर परिवारका सदस्यले चलाएकै व्यवसाय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । यति धेरै लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अग्रज दाजुहरू भने हुनुहुन्छ । सबै जना कहीँ न कहीँ केही न केही गरिनै रहनु भएको छ । तर, एकै पटक यसरी व्यवसायमा आइसक्नु भएको छैन ।
अन्य केही भन्नु छ ?
– मैले इटहरीबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु । यसलाई धेरै अघि बढाउने योजनामा छु । जे व्यवसाय सञ्चालन गर्छु, त्यसमा लागि परेर काम गर्छु । यहाँका अग्रज व्यवसायी तथा अन्य शुभेच्छुकहरू जो हुनुहुन्छ । हामीजस्तो युवाले यहीँ केही गर्ने सोच बनाएर लगानी गरेको छु । मलाई मात्र होइन । आम व्यवसायी र विशेष गरी युवा व्यवसायीलाई सबैले प्रोत्साहन गरौं । ता कि भोलिका दिनमा व्यवसाय छाडेर हिँड्नु नपरोस् । सरकारले पनि युवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो । जसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना बढेर जानेछ ।